मनोरञ्जन Archives - Page 257 of 258 - Sawal Nepal
सलमानको गलामा जुत्ताको माला…!
असोज । बलिउड सुपरस्टार सलमान खानका फ्यानका असंख्य छन् । उनलाई नचिन्ने सायद कमै होलान् । सलमानको घाँटीमा जुत्ताको माला परेको खबरले फिल्मी बजार तातिएको छ । उनको यो खबरले फ्यानहरुलाई निराश बनाउला । तर, यो वास्तविक जीवनमा भने होइन । उक्त फोटो सलमानले बहिनी अर्पिताको छोरा अर्थात् भान्जासँग जिस्किएर खिचेका थिए । जसलाई अर्पिताले
‘व्यूटिफूल वुमन अफ बहराईन’ को टप टेनमा नेपाली चेली
आश्विन ४, २०७३- बिगत ८ वर्षदेखि बहराइनमा कार्यरत इन्दिरा क्षेत्री बहराइनको चर्चित पत्रिका बहराइन कन्फिडेन्सियलले आयोजना गरेको व्युटिफूल वुमन अफ बहराइनको टप १० मा पुग्न सफल भएकी छिन् । पर्वतमा जन्मेकी इन्दिरा बहराइनको नेपाली समाज तथा अन्तराष्ट्रिय कलाकार मञ्चकी सल्लाहकार पनि हुन् । बहराइनमा कार्यरत विभिन्न देशका सुन्दरीहरुले भाग लिएको यस प्रतिस्पर्धामा आफूले नेपालीहरु
शालु गौतम का सामाजिक सन्जल मा देखिएका केही सेक्सी तस्बिर हरु
बाहुबली–२ सुटिङ हुँदै
महिनायता बलिउडमा सबैभन्दा चर्चामा छ, ‘बाहुबली–२’ । बाहुबलीले बलिउडमा अनेकौँ रेकर्ड राखेको कारणले गर्दा नै यो चलचित्र चर्चामा छ । बाहुबली–२को सुटिङ सकिएको खबर केही समयअघि नै सार्वजनिक गरिएको थियो । हैदरावादको रामोजी फिल्म सिटीमा भएको सुटिङबारे विभिन्न रिपोर्ट बने । तर, यसका निर्माता सोबु यारलागादाले फिल्मको सुटिङ अझै नसकिएको बताएका छन् । उनले फिल्मको
काठमाडौं, २ असोज । रात छिप्पिँदै थियो । घडीमा नौ बज्दै गर्दा ललितपुरको च्यासल चोकमा मानिसको भीडभाड बढ्दै गयो । चारैतिर मधुरो बत्ती । सजिलै मानिसको अनुहार छुट्याउन नसकिने । ‘झ्याल्चा’चपा भन्ने एउटा पुरानो घरको उत्तरपट्टि मोहडामा ठूलो झ्याल देखिन्छ । त्यही झ्यालमा टाँगिएको थियो सेतो पर्दा । भित्रको उज्यालोले एकाएक पर्दामा दुई मानव आकृति
एजेन्सी । बलीउड नायिकाहरु पछिल्लो समय ड्रेसअपमा थप उदार देखिन थालेका छन् । हलिउडको ठाडो प्रभाव क्रमिक रुपमा बलिउडका कलाकारहरु पनि देखिँदै जान थालेको छ । जसको पछिल्लो उदाहरण बनेकी छिन् नायिका आलिया भट्ट । कार्यक्रममा उपस्थित हुँदा सबैको ध्यान खिचन नायिकाहरुले पारदर्शी कपडा लगाउने गरेका छन् । त्यही सुत्रलाई आलीयाले पनि आत्मसाथ गरेकी छिन्
मायाको कुरा त बिर्सी सकियो
कविता सिवकोटी नाम सयद कमैले मात्र ले सुन्नु भएको छ होला । अहिले बजार मा विभिन्न किसिम का तिज को गीत निकाल्ने होट बाजी नै चलेको छ यही क्रम मा कविता सिवाकोटी ले पनि पतिदेव बजार मा ल्याएकी छिन । उनि सगै गरीएको कुरकानी जस्ताकोजस्तै :- १) तपाईले नयाँ गीत ल्याउनु भएको छ रे हो
सुटिङमा भेटिएका माग्ने बुढा भन्छन्, ‘स्वास्थ्य सुधार हुँदैछ’
भाद्र ३१ , २०७३- फिल्म ‘छक्का पञ्जा’पछि अभिनय बिराम लगाएका कलाकार केदार घिमिरे ‘माग्ने बुढा’को पुनरागमन भएको छ । ‘डिप्रेसन’ भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमासमेत दर्शकले चिन्ता जनाइरहेकाबेला बुधबार मैतीदेवीको एक स्टुडियोमा उनले आफ्नो गीतको सुटिङ गरे । हरि लम्सालको संगीत तथा आफ्नै शब्द र स्वरको ‘मन्त्रीको सालो…..’ को सुटिङ सुरु गरे । माग्ने बुढा दीपक आचार्यको
सलमानको सहयोगमा ‘टाइगर जिन्दा है’ मा क्याट्रिना
एजेन्सी, ३० भदौ । बलिउड अभिनेत्री क्याट्रिना कैफका फिल्महरु केही समययता खासै चलेका छैनन् । तैपनि बजारमा उनको काफी चर्चा छ । उनको यही बीचमा अभिनेता रणवीर कपुरसँग ‘ब्रेकअप’ पनि भएको खबर सार्वजनिक भए । यही भएर पनि उनले नयाँ फिल्मको मौका नपाएको चर्चा छ । तर पनि अब क्याट्रिनाको जीवनमा नयाँ खुसी आएको छ
फेशन नोभा २०१६ हुने
काठमाडौं । राजधानीको सोल्टी क्राउन प्लाजामा असोज १ गते फेशन नोभा नामक फेशन शो आयोजना हुने भएको छ । द क्रियशनको प्रस्तुति तथा राइजिङ नेपाल प्रा. लि. को सहकार्य तथा व्यवस्थापनमा कार्यक्रम हुन लागेको पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी दिइयो । शो मा द क्रियशन स्कुल अफ फेशन डिजाइनका ३० जना विद्यार्थीले तयार पारेको डिजाइन विभिन्न १६